Ọnụọgụgụ Rome sitere na 1 ruo 1000: Ndepụta, onye ntụgharị okwu na mmega ahụ
Ruo ugbu a, ọtụtụ ndị mmadụ na -eji sistemụ Ọnụọgụgụ Arabic maka ịdị mfe. Ọ bụ ezie na n'oge ndị ọzọ ọ dị iche. Ọtụtụ afọ gara aga Alaeze ukwu Rom ọ chịrị nnukwu ókèala ruo ọtụtụ narị afọ. Site na nnukwu ikike ya, ọ gbasara amamihe ya na ihe ọmụma ya ebe niile, na -eme ka a mara ya Ọnụọgụgụ ndị Rom.
N'ime akwụkwọ ntuziaka a, anyị chọrọ ịkụziri gị usoro ọnụọgụ a, nke a ka na -ejikwa na ihe ụfọdụ (dịka na fim: Agha kpakpando IV, V, VI), ma kọwaara gị ya ka ị nwee ike ịmụta ya n'ụzọ dị mfe. Nke mbụ, ọ bụrụ na ịmaraworị tiori na ihe ịchọrọ bụ iji onye ntụgharị, ị nwere ike jiri nke a site ebe a:
1 Roman Nọmba Ntụgharị Asụsụ (Ntụgharị)
2 Gịnị bụ ọnụọgụgụ ndị Rom?
3 Kedu ka esi ede nọmba Rome?
4 Ndepụta nke ọnụọgụgụ ndị Rom
4.1 site na 1 ruo 50
4.2 site na 1 ruo 100
4.3 site na 1 ruo 500
4.4 site na 1 ruo 1000
4.5 site na 1 000 gaa n'ihu
5 Iwu onu ogugu ndi Rom
6 Oge akara na ọnụọgụ Rome
7 Etu esi etinye nọmba Roman na Okwu?
8 Ihe omume
Roman Nọmba Ntụgharị Asụsụ (Ntụgharị)
Gịnị bụ ọnụọgụgụ ndị Rom?
Ọnụọgụgụ ndị Rom bụ usoro ọnụọgụ nọmba anaghị adịkarị taa. Emebere ha mkpụrụedemede ukwu iji nọchite anya ọnụọgụgụ. A na -agbakwụnye ma ọ bụ wepụ njikọta nke mkpụrụedemede ndị a iji nye ọnụọgụ ọzọ. Akwụkwọ ozi niile ejiri dị ka ndị a:
Dịka ọmụmaatụ, nọmba 1 nọchiri anya ya akwụkwọ ozi I ", na abụọ site na nchikota nke 2 "II". Ozugbo aghotara nha nha ndị a, n'okpuru anyị ga -akọwa etu esi ede ọnụọgụ Rome.
Kedu ka esi ede nọmba Rome?
Iji dee ọnụọgụgụ ndị Rom, ị ga -emerịrị nke ọma mgbakwunye na mwepụ. Ihe ndị ọzọ bụ iwu dị mfe anyị ga -egosi gị. Iji malite ị ga -ama nke ahụ enwere ike ọ bụghị karịa mkpụrụedemede 3 n'usoro.
Ọ bụrụ na mkpụrụedemede abụọ ha nhata, ma ọ bụ nke mbụ karịrị nke abụọ, ha gbakwunyere, ma ọ bụghị (ebe mkpụrụedemede nke mbụ erughị nke abụọ), na -ewepu ya. Dịka ọmụmaatụ:
Ọ bụrụ na ịchọrọ iji nọmba nha ma ọ bụ karịa 4, ị ga -etinye ahịrị, akpọrọ njikọ, n'elu mkpụrụedemede. Nke a ga -apụta na ọnụ ọgụgụ a na -amụba site na 1. Dịka ọmụmaatụ, 4.000 na ọnụọgụ Rome a na -anọchite anya nke a:
Nọmba 10.000 a na -anọchite anya nke a:
N'ikpeazụ, otu nke nwere ike ịdị mgbagwoju anya, nke 50.000 na ọnụọgụ Rome edere ya dị ka ndị a:
N'oge gara aga, a chọghị ọnụọgụ buru ibu, dịka nde. Na ndị Rom anaghị eche. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga -ekwe omume dee ha site na idobe ahịrị n'okpuru na karịa mkpụrụedemede. N'echiche ahụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ izo aka na 5, anyị ga -eji usoro ahụ:
Nọmba 5 (V) na ọnụọgụ ya, 50 na 500 (L, D), enweghị ike iji ha wepụ ihe. Ọ ezighi ezi ide "VC" iji zoo aka na faịlụ nọmba 95.
Ụdị ziri ezi bụ: XCV.
Ndepụta nke ọnụọgụgụ ndị Rom
Ebe ị nwere echiche otu esi ede ọnụọgụ Rome, ọ dị mma ka ị hụ ndepụta zuru oke yana nọmba site na 1 ruo 1000, na usoro ọzọ nke ọnụ ọgụgụ dị elu. N'ụzọ dị otú a, ị ga -amata ha nke ọma wee nwee ike ịghọta ha nke ọma.
site na 1 ruo 50
Ọnụọgụgụ ndị Rom
8 nke Asatọ
13 nke Iri na Atọ
17 na Asaa
34 Ọ bụ XXXIV
53 N'ỤLỌ NCHE
701 Ụlọ ọrụ DCCI
800 Ụlọ ọrụ DCCC
site na 1 000 gaa n'ihu
N'ime ndepụta ndị gara aga, anyị erutela nọmba 1.000, nke M. nọchiri anya ya, anyị na -ewetara ọnụọgụ ndị ọzọ dị elu nwere ike ịmasị gị.
4: 001: XNUMX IVI
5: 954: XNUMX VCMLIV
Anyị na -etinye nọmba enweghị atụ n'ihi na anyị chere na ịgụta ha niile ga -abụ enweghị isi na adịghị ike. Leba ha anya wee hụ ihe bụ nhazi anyị ji ede ha, nke kakwa mma, wepụta ụzọ ọzọ iji nọchite anya otu ọnụọgụ. Mgbe ahụ anyị ga -agwa gị ihe kpatara ya enwere ike dee ha naanị otu ahụ. Ozi ahụ ga -enyere gị aka nke ukwuu.
Iwu onu ogugu ndi Rom
N'eziokwu, arụmọrụ mgbakọ na ọnụọgụ Rome bụ ntakịrị aghụghọ, n'eziokwu, nke ahụ bụ otu n'ime ihe kpatara ya kedu ihe kpatara sistemụ ọnụọgụ a ji kwụsị ọrụ. Ụzọ iji dozie arụmọrụ ndị a gụnyere ịgbaso usoro ụfọdụ, dị ka ọ dị na ọnụọgụ Arabic, agbanyeghị, usoro a na ọnụọgụ Rome. Ọ ka ogologo.
N'ebe a, anyị ga -akọwa etu tinye, wepụ, mụbaa na ike na ọnụọgụ Rome oge ochie.
Iji tinye ọnụọgụ ọnụọgụ abụọ nke Rome ị ga -emerịrị usoro ndị a:
Gbanwee mwepụ na mgbakwunye. Dịka ọmụmaatụ: site na XXIX (29) ruo XXVIIII. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na emegharịrị akwụkwọ ozi ihe karịrị ugboro 3.
Concatenate (sonye) nọmba abụọ a. Dịka ọmụmaatụ: XXIX + XIV = XXVIIII + XIIII = XXVIIIIXIIII (ebe a anyị tinyere ha ọnụ).
Ịtụ akwụkwọ ozi site n'onye kasị ukwuu ruo n'onye nta. Ọmụmaatụ: XXVIIIIXIIII = XXXVIIIIIIII.
Nke ahụ bụ, dee mkpụrụedemede n'ụzọ ziri ezi na -agbakwụnye site n'aka nri gaa n'aka ekpe. Ọmụmaatụ: XXXVVIII.
Tinyegharịa usoro a site n'iwu ndị anyị kọwara ruo mgbe ọ zuru oke. Ọmụmaatụ: XXXVVIII → XXXXIII → XLIII.
Mwepu dị mfe karịa mgbakwunye. Iji mezuo ya, soro usoro ndị a.
Gbanwee mwepụ na mgbakwunye. Ọmụmaatụ: site na CCXLI (241) ruo CCXXXXI. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na emegharịrị akwụkwọ ozi ihe karịrị ugboro 3.
Kpochapụ mkpụrụedemede nkịtị n'etiti ọnụọgụ abụọ. Ọmụmaatụ: CCXLI - LXXXV = CCxxxXI - LxxxV = CCXI - LV.
Gbasaa akwụkwọ ozi nke okwu mbụ ruo mgbe mkpụrụedemede nke abụọ pụtara. Ọmụmaatụ: CCXI - LV = CLLXI - L
Tinyegharịa nzọụkwụ 2 na 3 ruo mgbe okwu nke abụọ ghe oghe. Ọmụmaatụ: CLLXI - LV = CLXI - V = CLVVM - V =
Ya bụ, dee mkpụrụedemede ahụ nke ọma. Ọmụmaatụ: CLVI = 156. N'okwu a, ọ ka bụ otu n'ihi na enweghị mkpụrụedemede na -ebelata.
Iji mụbaa ọnụọgụgụ ndị Rome ị ga -amatarịrị tinye ha, kewaa ma mụbaa ọnụọgụ Arabic site na 2. Ịkwesịrị ịme tebụl, debe nọmba Rome n'aka nri yana nke ọzọ n'aka ekpe. Mgbe ahụ soro usoro ndị ọzọ.
Anyị ga -arụtụ aka "Na" dị ka ọnụọgụ ndị dị n'aka ekpe ugbua "B" dị ka ndị nọ n'aka nri.
Kewaa A site na 2 wee debe obere akpa n'okpuru. Ọmụmaatụ: 23/2 = 11.
Na -amụba B site na 2 wee debe nsonaazụ n'okpuru.
Tinyegharịa usoro 1 na 2 ruo mgbe kọlụm aka ekpe (okwu A) bụ nọmba 1.
Wepụ ahịrị niile site na tebụl nke juputara n'aka ekpe ya dị.
Tinye ọnụ ọgụgụ niile fọdụrụ na kọlụm aka nri (okwu B).
Hụ ọmụmaatụ otu ị ga -esi mụbaa ọnụọgụ abụọ nke Rome.
Ugbu a, anyị na -ehichapụ ahịrị niile ebe akụkụ aka ekpe enwere ọnụọgụ ọbụla.
Ugbu a, anyị ga -agbakwụnye nọmba naanị n'akụkụ aka nri dịka anyị merela.
XXXVIII + CLII + CCCIII +MMCCCCXXXII (tụgharịa mwepụ n'ime nchikota)
XXXVIIICLIICCCIIIIMMCCCCXXXII (tinye nọmba ọnụ)
MMCCCCCCCCLXXXXXXXVIIIIIIIIIII (depụta ha site na elu ruo na ala)
MMDCCCLLXVXI (dị mfe site na ịgbakwunye site n'aka nri gaa n'aka ekpe)
MMDCCCCXXVI (mee ka ọ dị mfe site na ịgbakwunye site n'aka nri gaa n'aka ekpe)
MMCMXXVI (nsonaazụ ikpeazụ: 2926)
Nkewa na ọnụọgụgụ ndị Rom ha enwechaghị ihe ịga nke ọma, ewezuga na onweghị iwu a ma ama iji wepu ha.
Naanị ihe amara bụ na ị ga -ewepu faịlụ onye na -ekesa ya na dividend ruo mgbe ị ruru nọmba na -erughị nkewa. Ọmụmaatụ: 10/3. Ebe a bụ dividend bụ 10 ebe onye nkesa bụ 3.
Ihe ị ga -eme iji gbakọọ nkewa na ọnụọgụ Rome bụ ihe ndị a:
Ihe foduru bụ 1 na nkenke bụ 3 (n'ihi na anyị ewepụla ugboro 3). Yabụ azịza ya bụ 3, agbanyeghị, ọ bụghị eziokwu kpamkpam, ebe ọ bụ na 10/3 = 3,33333 ...
Ị ga -eji mkpụrụedemede Rome mee otu usoro a, ị ga -enweta nsonaazụ na sistemụ ọnụọgụ ahụ. Ka ị wee doo anya gbasara ozi a, anyị ga -egosi gị ihe ndị ọzọ ị kwesịrị iburu n'uche gbasara ọnụọgụ ndị a. Anyị ji n'aka na otu a ị ga -aghọta ha nke ọma.
Ọnụọgụ ndị Rom ha nwere uru nkịtị. Yabụ, ọ gaghị adị mma ịsị “VIII. "Egwuregwu Olympic". Ihe ziri ezi bụ: Egwuregwu Olympic nke Asatọ.
Akwụkwọ ozi "V, D na L" a naghị eme ha ọzọ. Enwere mkpụrụedemede ndị ọzọ na -anọchi anya ọnụọgụ ndị ahụ, dịka ọmụmaatụ, kama ide LL, nke ga -abụ 100, a na -eji mkpụrụedemede C.
Nọmba efu (0) adịghị n'ime ọnụọgụ ndị Rome. Iji rụtụ aka na ọnụọgụ ha jiri okwu ndị a nulla, nihil ma ọ bụ leta N.
Akara m nwere ike wepụ naanị na V na X.
Akara X nwere ike ibelata naanị site na L na C.
Akara C nwere ike ibelata naanị D na M.
Naanị ihe ga -eme bụ ide mkpụrụedemede ndị Rome n'ime okpu ukwu bụ ịhazi ndepụta nke ihe.
Ojiji ọnụọgụ ọnụọgụ Rome dị ụkọ, n'agbanyeghị na mmụta ha dị mkpa. Ị ga -ahụkarị ka edere ha n'okwu ndị a:
N'ọtụtụ ndị pope, ndị eze ukwu, ndị isi ma ọ bụ ndị eze nwere otu aha (Henry nke Asatọ nke England).
Ịkpọ aha narị afọ (narị afọ nke XNUMX).
Ka ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ isi nke akwụkwọ ma ọ bụ ihe nkiri (Isi nke M).
Ịgụ mmemme a na -eme kwa oge (Egwuregwu ịchụ nta IV).
Ịkpọ usoro nke ọdịbendị ụfọdụ (usoro ndị eze XVI Qing).
Oge akara na ọnụọgụ Rome
Ide ụbọchị na ọnụọgụ Rome dị mfe. Naanị ihe ị ga-eme bụ ikewapụ ụbọchị ahụ ka ọ bụrụ otu dị iche iche wee gbanwee nke ahụ gaa na ọnụọgụ ndị Rome. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị chọrọ ịgbanwe ụbọchị 01-02-2018, ma ọ bụ ihe bụ otu ihe, 1 de febrero de 2018. Mbụ anyị na -atụgharị ụbọchị, 1, nke ga -abụ m, mgbe ahụ anyị na -atụgharị ọnwa, 2, nke ga -abụ II, n'ikpeazụ anyị atụgharị afọ, 2018, nke ga -abụ MMXVIII.
Mgbe ahụ, anyị na-achịkọta akụkụ nke ọ bụla na usoro ọdịnala anyị: I-II-MMXVIII. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara usoro a, ị nwere ike hapụ anyị okwu na njedebe nke akụkọ a.
Etu esi etinye nọmba Roman na Okwu?
Ọtụtụ n'ime unu ajụla anyị ajụjụ a, anyị ga -anwa ịza ya n'ụzọ kacha mma. Nke mbu, ọ bụrụ na ịchọrọ ide 1 na ọnụọgụ Rome na nhazi okwu Okwu, naanị ị ga -ede akwụkwọ ozi m na nnukwu mkpụrụedemede. Site na 1 ruo 4000 enwere ike iji mkpụrụedemede ndị anyị na -ejikarị egosipụta ya. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ide nọmba buru ibu, dị ka 5000, ị ga -eji akara vinculum dị ka anyị kwurula, nke anyị nwere ike nweta site na isoro usoro ndị a:
Mbụ niile anyị pịa Fanye -> Nha nha ọhụrụ.
Mgbe ahụ anyị na -achọ nhọrọ Accent wee họrọ akara otu mmanya n'elu:
Nke anyị ga -enwe ihe dị ka nke a na akwụkwọ Okwu anyị:
N'ikpeazụ, n'ime ogige ahụ, anyị na -ede ihe ọ bụla anyị chọrọ ka vinculum nwee. Dịka ọmụmaatụ, maka nọmba 5002 anyị ga -enwe:
Jikere! Ị marala ka esi ede nọmba Rome na Okwu. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndepụta were jiri ọnụọgụ Rome kama ọnụọgụ nkịtị, a na -eji nhọrọ na -esonụ:
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ị nwere ike hapụ anyị okwu n'okpuru ma anyị ga -aza ya ozugbo enwere ike.
Na -esote, anyị akwadebela gị mmega ahụ ole na ole ka ị nwee ike nwalee ihe ọmụma gị na ọnụọgụ Rome. Ị nwere ike ịtụle ihe anyị na -amụta n'ime akụkọ a na -enweghị nsogbu, ihe dị mkpa bụ ka ị debe ihe ndị bụ isi na isi ihe 🙂 jisie ike!
Inicio » omenala » Ọnụọgụgụ ndị Rom sitere na 1 ruo 1000
4 kwuru na "ọnụọgụ Rome sitere na 1 ruo 1000"
Septemba 17, 2018 na 1:00 pm
Ụtụtụ ọma, abụ m onye nkuzi na ndị na -eto eto taa amachaghị ọnụọgụ Rome.Ọ ga -amasị m ka ị zitere m ego karịrị nde, dị ka otu puku lards na ndị ọzọ bụ ajụjụ ụmụ akwụkwọ na -ajụ m mgbe niile. , daalụ maka ozi a bara uru
November 10, 2018 na 2:07 pm
June 13, 2019 na 8:51 pm
Daalụ, abụ m nwa akwụkwọ klas nke ise, nke a na -ejere m ozi SOUCHOO
Septemba 16, 2019 na 11:33 pm
Daalụ, ọ baarala m uru ịtụle ihe ọmụma.